Nitrile glove mmepụta line Factory - China nitrile glove production line Manufacturers, Suppliers
Usoro ogwu nke uzo ogwu na-achoputa ihe ndi ozo bu imeputa ogwe aka ndi ozo nke na-agbaso ụkpụrụ European na America. Esemokwu dị iche na usoro ntinye aka nitrile glove bụ:
1. Raw ihe: ọgwụ na ahụ ike ọkwa nitrile latex
2. Production akara: nkenke nke mmepụta akara akụrụngwa
3. facilitieslọ ọrụ na-akwado: ịgbakwunye mmiri, ihicha, na izu ogwu nke ethylene
4. Chemical usoro: proprietary usoro maka ọgwụ ọgwụ igba ogwu
5. Ule: jiri aka na-anwale glove ọ bụla
Nonlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ na-enweghị isi na-adịghị ọcha bụ otu ihe dị ka akara ntanetị na-emepụta nitrile glove. Ihe dị iche bụ na àgwà nke akụrụngwa chọrọ ọgwụ ọkwa, na-tumadi kewara: inggwakọta usoro, isi mmepụta akara usoro, ike usoro, inyeaka ngwá, laabu akụrụngwa, nkwakọ akụrụngwa, Green ụlọ ọrụ, Post-nhazi akụrụngwa.
Dị ka kpakpando na-eto eto n'etiti uwe roba, nitrile gloves ga-enwerịrị ike ahịa. N'ileghachi anya na ahia nke ulo na nke mba ozo, onu ahia ahia nke ulo oru nitrile glove na-abawanye mgbe nile ma obu obuna ihe kariri olile anya. Dị ka data nyocha data si dị, ahịa glove roba dị na ngwụcha ngụlite, yana ahịa nwere usoro doro anya nke mgbasa. Omume mmepe nke nitrile roba glove valve flapper valve ga-aga n'ihu na-ebili. Ọkpụkpụ nitrile bụ otu n'ime gloves ndị nwere ike iwepu naanị. Ngwongwo nitrile ndị a na-ekpofu mmiri bụ ogige ndị sitere na acrylonitrile na butadiene. Ha anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-anaghị arịa ọrịa. Ha bụ ndị ama ama na ahịa Europe na America. Tọ ntọala ụzọ na-emepụta gloria nitrile nwere ike mepee ahịa ahụ ngwa ngwa wee nweta ọtụtụ iwu.
A na-emepụta ahịrị ndị ahịa ọ bụla nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dị ka ngwa kachasị sie ike ma sie ike. Ọ kachasị dabere na mmepụta nke ngwaahịa ọrụ, yana na ịkwalite ịdị mma. A na-ewukwasị usoro mmepụta ihe na-eji ire ụtọ na-echebara ihe ọkụkụ, ọnọdụ akụ na ụba na ndị ọrụ echiche n'oge usoro mmepụta na usoro ihe owuwu.